I-CAT S31 entsha kunye nee-smartphones ze-S41, ezona fowuni zinzima zabasebenzisi abafuna | Iindaba zeGajethi
UKarim Hmeidan | | Iiselfowuni, Imiboniso
Xa sithatha isigqibo thenga i-smartphone okanye enye, sihlala sijonga ukumelana nayo. Ngokucacileyo, ukuhlawula amaxabiso abekwa ngabavelisi mva nje kusenza soyike malunga neengozi ezinokubangela ukuba izixhobo zethu ziphele zonakaliswe, kwaye ngokucacileyo ngaphandle kwesiqinisekiso.
Ngenxa yezi ngxaki, kukho intengiso yezixhobo ezichazwe njengezingaxhathisi, ukumelana novavanyo lwayo yonke into eya kuthi ibenze ukuba banganyangeki kuyo nayiphi na ingozi esinokuba nayo. Namhlanje sikuphathela ezona zinto zinganyangekiyo, ii-smartphones ze-CAT ezibona uluhlu lwezixhobo ezihlaziyiweyo ukuze abantu abafuna abantu banelise umnqweno wabo wokuthenga into eluncedo nenganyangekiyo. Emva kokutsiba sikunika zonke iinkcukacha ezintsha I-CAT S31 kunye neCAT S41, esinye sezixhobo ezinganyangekiyo kwintengiso phantsi kwesiqinisekiso seCAT, umenzi ophambili wezixhobo zokwakha ezinobuchule kunye nezixhobo zeshishini.
Njengoko sele ubonile, sijamelene ii-smartphones ezikhethekileyoNgokombono wam, ayizizo ii-smartphones zomsebenzisi "oqhelekileyo", oqondwa njengesiqhelo njengomsebenzisi ongasoloko ekwiimeko apho i-smartphone inokuvezwa emngciphekweni. Ungayibona kwividiyo edlulileyo, akukho CAT ye-smartphone etafileni kwindawo yokutyela, okanye kwimoto engaphantsi komhlaba (nangona kufuneka kuthiwe oku kunokuba yingozi), I-CAT zisentsimini, ezintabeni, ziyasebenza….
1 I-CAT S41, uluhlu oluphakathi oluphakathi
2 I-CAT S31, ngexabiso eliphantsi ngokufana neempawu ezifanayo
3 Ngaba ndiyayithenga i-CAT S31 okanye i-S41?
I-CAT S41, uluhlu oluphakathi oluphakathi
Ukugxila kwiimodeli ezimbini ezintsha ezinikiweyo, kufuneka kuthiwe ngaphandle kokuthathela ingqalelo i-CAT S60 eboniswe kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo (imodeli edumileyo ngekhamera eshushu), le S41 iza kuthatha indawo ye-S40 endala kwaye ke ihlala kuluhlu oluphakathi ii-smartphones ezivela kwinkampani: i-S60 iya kuba sisiphelo esiphakamileyo, i-S41 phakathi kuluhlu, kunye ne-S31 isiphelo esisezantsi. I-CAT S41 nge Isiqinisekiso se-IP68, zonke izihlanganisi azinamanzi kwaye nangona yonke into ikhuselwe yiminqwazi yeplastiki, oku kukuthintela ubunzima ekususeni ulwelo ekuhlaleni ngaphakathi kwesixhobo.
I-Smartphone enamandla kakhulu ene-processor IMTK P20 MT6757 2,3 GHz octa-core, 3 GB ye-RAM kunye ne-32 GB yokugcina ngaphakathi. Ingqondo exhaswa yi-Android Nougat kwaye ngokwento abasixelele yona, bayathemba ukuba ingaqhubeka nokuhlaziywa ngaphandle kweengxaki kwiinguqulelo ezilandelayo zenkqubo yokusebenza ye-Android. Isikrini se 5 intshi ngeGorilla Glass 5, kwaye ngokwento abasixelele yona, kuvavanywa ukuwa kweemitha eziyi-1.8 kwikhonkrithi. Kufuneka kuthiwe ewe, iyiselfowuni enganyangekiyo (enganyangekiyo kuwa, enganyangekiyo emanzini, enganyangekiyo kulwelo ...) kodwa ndingathi ukuba ufuna ukuyophula uzakuyaphulaOko kukuthi, ukumelana neengozi zemihla ngemihla, ngokucacileyo ngokuba eyakhelwe kwiiplastikhi iyakonyuka ngakumbi kune-iPhone eneziciko zeglasi.
Ngaphandle kwamathandabuzo, enye yezona zinto zinomdla ngale CAT S41 kukusebenzisa i I-5000 mAh ibhetri ukuze ukwazi ukubiza ezinye izixhobo (unethuba lokusebenzisa imali ngokukhawuleza ngokubeka i-S41 kwimo yokulala), Oko kukuthi, sebenzisa i-CAT S41 njengebhanki yamandla kwezinye izixhobo, into eluncedo kodwa ngokombono wam ayiloncedo kakhulu (kufanelekile ukungafuneki), ndicinga ukuba ekugqibeleni siyazibopha ngentambo kwesinye isixhobo ukuyibiza akunaziphumo.
I-CAT S31, ngexabiso eliphantsi ngokufana neempawu ezifanayo
Ukutshintsha imodeli, sigxila kwi-CAT S31, i-smartphone esingayihlela ngayo kuluhlu olusezantsi lwe-CAT, ewe, inezinto ezifanayo nomntakwabo omdala i-CAT S41 ngexabiso eliphantsi. Le CAT S31 inomboniso we 4,7 intshi ekhuselwe yiGorilla Glass 3 Nangona basixelela ukuba ikwavavanywa nakukuwa ngaphezulu kwemitha enye enesiqingatha (unesatifikethi sokumelana esifanayo ne-S41). Baye bafaka iprosesa Qualcomm Snapdragon de Isiseko se-quad kwi-1,3 GHz, sikhatshwa yi-2 GB ye-RAM kunye ne-16 GB ukugcinwa kwangaphakathi. Ewe, izinto ezimbi ngakumbi kodwa ekugqibeleni uza kusisebenzisa esi sixhobo ukwenza into oza kuyisebenzisela yona, ngenxa yeemeko eziyingozi, ke ndiziva ngathi ngakumbi ukuba ufuna i-smartphone enganyangekiyo.
Ngaba ndiyayithenga i-CAT S31 okanye i-S41?
Kumbuzo wegolide malunga nokuba ukuthenga okanye hayi i-CAT S31 okanye i-S41 entsha, impendulo yam kukuba ixhomekeke, kuxhomekeke kwizinto ezininzi. Sijongene nezixhobo ezingenamaxabiso aphezulu kakhulu (I-384 euro ye-CAT S41 kunye ne-329 ye-euro ye-CAT S31), Into enokubenza bathandeke ngokucacileyo, kodwa kufuneka sikwenze oko zithathele ingqalelo iimeko ngamnye wethu anazo. Ndicinga ukuba sisixhobo esihle kuye nabani na onokusisebenzisa emsebenzini wakhe, imisebenzi ethi, njengoko besitshilo, ibeke ingozi kwizixhobo zethu, i-CAT luphawu lwesalathiso, kwaye uya kuba nezixhobo ezinganyangekiyo.
Los I-CAT S31 kunye ne-S41 zezona zixhobo zinzima kwintengiso (ngaphandle kokucinga ngokudlula kwilori ngaphezulu kwazo) kwaye zilukhetho olufanelekileyo ukuba ucinga ngesixhobo esinganyangekiyo, kungenjalo, uya kuthi ekugqibeleni uthenge nasiphi na isixhobo esithengisa kakhulu. IAmazon neMediaMarkt ngabasasazi abasemthethweni Kwaye baya kufika kwilizwe lethu kwiinyanga ezizayo, ke uyazi, vavanya iimpawu kunye neemfuno.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » I-CAT S31 entsha kunye nee-smartphones ze-S41, ezona fowuni zinzima kubasebenzisi abafuna ngenkani